कसले आफ्नो तेल पक्रन सक्छ? | Martech Zone
कसले आफ्नो तेल पक्रन सक्छ?
शुक्रबार, जनवरी 16, 2009 सोमबार, नोभेम्बर 4, 2013 Douglas Karr
सबै दिन - व्यक्तिहरू मलाई ईमेल गर्नुहोस्, मलाई पाठ गर्नुहोस्, ट्विटर गर्नुहोस्, मलाई भेट्नुहोस्, मलाई कल गर्नुहोस् र तत्काल सन्देश मलाई डोमेन, क्षमताहरू, CSS, प्रतिस्पर्धा, कीवर्ड रणनीति, ग्राहक मुद्दाहरू, बिक्री स्थिति, मार्केटि strate रणनीतिहरू, ब्लगिंग, सामाजिक मिडिया, आदि। म बोल्न, लेख्न, मद्दत गर्न, भेट्नको लागि निमन्त्रणा पाउँदछु ... तपाईं यसलाई नाम दिनुहोस्। मेरा दिनहरू व्यस्त छन् र अविश्वसनीय रूपमा पूरा छन्। म कुनै प्रतिभाशाली छैन तर मसँग धेरै अनुभव छ र मानिसहरूले यसलाई पहिचान गर्छन्। मलाई मद्दत गर्न पनि मन पर्छ।
चुनौती भनेको ती सानो साना मुद्दाहरू र अवसरहरू मध्ये प्रत्येकमा कसरी मूल्य लागू गर्ने हो। मेरो दृष्टिकोण यो छ कि यो पुरानो दिनहरू जस्तै छ जहाँ ओइलरले ट्रेनका पा .्ग्राहरूलाई तेलमा राख्छ ताकि यो छिटो र सजिलो ट्रयाकमा जान सकीन्छ। तेल हटाउनुहोस् र रेल रोकिन्छ। तेलर कहाँ, कहिले, किन र कति धेरै जान्दछन्। मँ तेलुई जस्तो महसुस गर्छु - तर धेरै व्यापक मापनमा। मलाई सोधिएका प्रश्नहरूलाई मैले विगत २ दशकहरूमा निर्माण गरेको दक्षता र अनुभवको आवश्यकता पर्दछ।
यद्यपि, तपाईंको रेलको ट्र्याकहरू गुम्दा जब यो तेललाई सम्झन वा सम्झन गाह्रो हुन्छ। रेल, कोइला, कन्डक्टर, ट्र्याकहरू ... तिनीहरू सबै 'ठूला' खर्चहरू र 'ठूला' समाधानहरू हुन् जुन सही मापन गर्न सकिन्छ। तेल लगाउने जस्तो सरल छैन। मलाई थाहा छ म रेललाई तेल नदिएको भए रेल यति चाँडो अघि बढिरहेको थियो - तर वास्तवमा यस्तो दाणेदार स्केलमा प्रभाव नाप्ने कुनै निश्चित तरिका छैन।
एक तेलर छैन? तपाईं ती स्रोतहरू कहिँ पनि खरीद गर्न सक्नुहुन्छ वा आफैँ अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ। यो मात्र समय, खर्च, जोखिम थप गर्दछ र तपाईं आफ्नो ग्राहकहरु प्रदान गरिरहनुभएको सेवा को गुणवत्ता कम गर्न सक्छ। तपाईं एक oiler हुनुपर्छ - हरेक संगठन हुनु पर्छ।
यो होइन ध्वनि नम्र, तर मेरो मा विनम्र विचार, म विश्वास गर्दछु महान नेताहरू प्रायः हुन्छन् तेल। तिनीहरू हरेक दिन अवरोधहरू हटाउन कडा मेहनत गर्दछन् ताकि तिनीहरूका वरिपरि रहेका व्यक्तिहरू कठिन परिश्रम गर्न सक्दछन्, छिटो दौडन सक्छन्, र अधिक सफल बन्न सक्छन्। टोलीले तेल रोप्दछन् किनकि उनीहरू अधिक सफल हुन प्रयोग गर्न सक्दछन्। प्रश्न यो हो कि oiler ले मान्यतालाई योग्य बनाउँछ वा प्रदान गरिएको मानको लागि बुझिन्छ।
जब तपाईंको मानलाई प्रश्न गरिन्छ तब के हुन्छ?
के तपाईं तेल रोक्नुहुन्छ र ट्रेनलाई जोखिममा राख्नुका साथै तपाईंमाथि निर्भर रहेका अन्य कामदारहरूसँग आक्रोश बढाउनुहुन्छ? के तपाईं, यसको सट्टामा, ग्रान्डर प्रोजेक्टहरू र अवसरहरूको पछि लाग्नुहुन्छ जहाँ तपाईंको मूल्य बिल्कुल मापन गरिएको छ र बुझिएको छ?
वा ... के तपाइँ उत्कृष्ट हुनुहुन्छ त्यसमा टाँसिनुहुन्छ? तपाईं आफ्नो कम्पनीको सफलता को ड्राइभि be्ग गर्न सक्नुहुनेछ - तर जोखिम के हो कि केहि ले यसलाई पहिचान गर्दैन, यसलाई कसरी मापन गर्ने जान्नुहोस्, यसलाई कदर गर्नुहोस् ... र प्राय: यो प्रश्न हुन्छ। डाटा र विश्लेषणको यस संसारमा, यदि तपाईं जवाफ दिन सक्नुहुन्न भने तपाईंको संगठनमा तपाईंको मूल्य के हो भने तपाईं समस्यामा पर्न सक्नुहुन्छ।
के तपाई एक तेलुई हुनुहुन्छ? के तपाइँसँग काममा तेल छ? कसले आफ्नो तेल पक्रन सक्छ?
टैग: कर्मचारीहरुतेल सक्छ
व्यापार क्रेताहरू फरक छन्!
तपाइँ के गर्नुहुन्छ को लागी तपाइँको डोमेन छोड्नुहोस्
जनवरी 17, 2009 मा 12: 16 एएम
"ओइलर" अवधारणा र IMHO को साथ धेरै रोचक दृष्टिकोण, तपाईं सही लक्ष्यमा हुनुहुन्छ। मेरो कार्यकारी दिनहरूमा, मैले मेरा प्रबन्धकहरूलाई व्यवस्थापनको बारेमा सल्लाह दिन अलि फरक दृष्टिकोण अपनाएँ र आज मेरो व्यवस्थापन कक्षाहरूमा म मेरा विद्यार्थीहरूलाई भन्छु कि व्यवस्थापकको काम: "कर्मचारीहरू सफल हुन सक्ने वातावरण प्रदान गर्नु हो" यो अर्को तरिका हो। उनीहरूलाई भनिन्छ कि उनीहरू "टिनम्यान" वा उनीहरूका कर्मचारीहरूका लागि तेल बनाउने जिम्मेवार छन् र ट्रेन वा संस्थालाई आवश्यक छैन।
मलाई साँच्चै रूपक मनपर्छ र भविष्यमा प्रयोग गर्नेछु। पोस्ट को लागी धन्यवाद
जनवरी 17, 2009 मा 12: 22 एएम
धन्यवाद SBM! दयालु शब्दहरूको कदर गर्नुहोस्!
साउथ क्यारोलिनामा कसरी व्यवसाय सुरु गर्ने
जनवरी 18, 2009 मा 11: 15 एएम
रूपक महान छ। विवरणमा प्रत्येक ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ।
जनवरी 18, 2009 10:56 बजे
मेरो प्रश्नहरूको जवाफ दिनको लागि सधैं समय निकाल्नु भएकोमा धन्यवाद। तपाईंको विशेषज्ञता र मद्दत गर्न इच्छुकताले मलाई खोजी र निराशाको घण्टा बचाएको छ।